3 yakasarudzika yakavhurwa sosi yekushandisa yeMac | Linux Vakapindwa muropa
Skim ndeye pdf gwaro kuverenga uye bhukumaki.
Kune avo vedu vanozvitarisa kubva kunze, iyo Apple nyika chinhu chakavanzika. Iyo Hardware inodhura kupfuura iyo yepc, uye hazvisi zvese zvikamu zvacho zvakajairika. Pasina kutaura kuti marezenisi avo evashandisi anoyeuchidza nezvezvibvumirano zvevassalage. Nekudaro, ine mafeni, uye mazhinji acho anodawo yakavhurwa sosi. Ndokusaka, mu Mune ino posvo tinokurukura matatu akasarudzika akavhurwa sosi mafomu eMac.
Ini ndoda kujekesa kuti ndine chokwadi chekuti kana iwe ukandipa bhajeti, iwe ungangovewo mumwe wevaya vateveri vanoshandisa yakavhurika sosi zvirongwa paMac. shandisa icho nemamwe mapurogiramu angu anodikanwa.
Kazhinji, lIwo makuru akavhurwa sosi mapurojekiti ane yavo vhezheni yeMac. Nekudaro, isu tinogona kufamba neFirefox, kutamba multimedia mafaera neVLC, kuita hofisi mabasa neLibreOffice, kana kubata bibliographic kuunganidzwa neCaliber.
Kune zvekare zvirongwa zviri zveMac chete, semuenzaniso izvi:
1 IINA mutambi wenhau
1.1 IINA Zvimiro
2 Skim gwaro rekuverenga uye annotator
2.1 Skim Zvimiro
3 Plain chinyorwa mupepeti CotEditor
IINA mutambi wenhau
Kana iwe wakashandisa Linux kwenguva yakareba, iwe zvirokwazvo unoziva Mplayer, mutambi akavakirwa tambo yekuraira. Mplayer anga forogo inonzi Mplayer2. Kubva Kubatana kweakanakisa hunhu hwevaviri kwakazvarwa MPV. MuLinux isu tine vamwe vatambi veMPV-vane graphical interface; GNOME-MPV uye BOMI vaviri vacho.
IINA ndeye MPV-yakavakirwa odhiyo uye vhidhiyo mutambi weMac. Iyo ine minimalist asi yazvino dhizaini.
Tsigiro yeKumanikidza Kubata, yekubata bhaa uye pikicha-mu-pikicha basa.
Paunovhura vhidhiyo, zvinobva zvango wedzera mamwe mavhidhiyo mune iyo folda kune playlist.
Kana iwe uri kuteerera kune audiobook kana podcast, IINA inokutendera iwe kukurumidza kufamba pakati pezvikamu zveMP3.
Iyo inowirirana inosanganisira mabhatani ezviridzwa, mimhanzi modhi, pikicha mumufananidzo, uye marongero.
Misoro yakasiyana yemushandisi interface.
Otomatiki kurodha pasi pemusoro. Inoda Opensubtitles account
Marongero akasiyana siyana eodhiyo nemavhidhiyo marongero.
Unogona kushandura kutaridzika kwemavara ezasi.
Kugadziriswa kwema keyboard mapfupi.
Skim gwaro rekuverenga uye annotator
Kunyangwe iko kunyorera kwekuona mifananidzo uye zvinyorwa zvakavakirwa muMac inoshanda sisitimu ine rutsigiro rwakanaka rwepdf zvinyorwa, isu tingangoda Skim kune mamwe mabasa akaomarara.
Skim muverengi wePDF yeOS X. Yakagadzirirwa kuti ikubatsire iwe kuverenga uye kutsanangura masainzi zvinyorwa muPDF, asi zvakare yakakosha pakuona chero imwe mhando yefaira.
Ona marudzi ese epdf zvinyorwa.
Wedzera uye gadzirisa manotsi.
Kubata-kumwe kuratidza kwemashoko akakosha.
Nyore mareferenzi kugadzirwa uchishandisa mashoma mapfekero.
Kufambisa nepatafura yezviri mukati uye peji zvigunwe.
Ona zvese zvinyorwa.
Kuverenga kuzere kwescreen.
Zoom yekuona gwaro.
Tsigiro yeLaTeX, SyncTeX uye PDFSync ..
Skim inosanganisira chinhu chinonzi bhawa rekuverenga kuti chikubatsire kutarisa. Uye iyo yemukati pane ine yakasimba yakavakirwa-mukati yekutsvaga basa: inosimbisa iyo yekutsvaga izwi pamapeji akakodzera uye mapoka iwo nehukuru uye pepa.
Plain chinyorwa mupepeti CotEditor
CotEditor chinyorwa chakareruka uye mupepeti wekodhi. Iyo ine yakachena uye yakapusa interface iyo inokutendera iwe kukurumidza kushandura mutsetse magumo, faira encoding, uye syntax yekupenda. Iyo inotsigira ingangoita makumi matanhatu emitauro mitauro, kuti iwe ugone kusarudza iwo marara e syntax sezviri kudikanwa.
Iyo yakasanganiswa yepaneru padivi inokutendera iwe kuti uone ruzivo rwakadzama nezve iyo faira ratiri kushanda nayo, kusanganisira zvinyorwa zvemavara, kuverenga kwehunhu, uye zvimwe zvakawanda. Iyo ine yakanakisa yenguva dzose expression rutsigiro uye ine simba zvinyorwa kutsvaga chishandiso, yakafanana neiyo yemabhadharo ekushandisa.
Izvo zvinokwanisika kupatsanura hwindo kuita mahafu maviri, kuti tikwanise kuchengeta imwe hafu yehwindo kuti ireferenzi tichiita kugadzirisa kune imwe.
Chekupedzisira, sei usingatiudze nezve ruzivo rwako uchishandisa Linux uye yakavhurwa sosi yekushandisa paMac?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » 3 yakasarudzika yakavhurwa sosi maapplication eMac
Maitiro ekurodha pasi, kushandura uye kutamba mavhidhiyo kubva kune iyo terminal